China Leap milina haingam-pandeha avo toerana avo roa heny mpanamboatra stacker sy mpamatsy | dingana
Mitsambikina milina haingam-pandeha avo lenta avo lenta
Ny milina mitsambikina haingam-pandeha haingam-pandeha avo roa heny dia misy ny rafitra, ny rafitra fandefasana, ny fiakarana miakatra sy midina ary ny fitazomana.
Ny endriny dia miraikitra amin'ny fantsona mahitsizoro 150x250 x 8mm, ary ny rafitra dia mafy orina sy milamina. Ny milina fanodinana gantry lehibe amin'ny masinina iray manontolo dia miantoka ny fisaka sy ny fitovizan'ny fiaramanidina fametrahana ny lalamby mpitari-dalana an'ny manipulator; Ao amin'ny rafitra fandefasana, ny manipulateur mitsivalana manipulator dia mandray maotera servo miaraka amina fehin-kibo mifamatotra mahery, kodiarana mifanentana, fivorian'ny torolàlana marina ary mametra ny mode photoélectric, miaraka amina toerana misy azy, feo mafy sy ambany eo am-pandehanana. Ny rafitra manainga ambony sy ambany dia natao miaraka amin'ny talantalana sy ny lalamby mpitari-dalana, ary ny mekanika misambotra dia natao miaraka amin'ny mombamomba ny aluminium sy ny varingarin'ny rivotra hampihenana ny lanjan'ny mandeha. Hentitra ny rafitra, ary mora ny manitsy ny haben'ny takelaka. Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia mety amin'ny takelaka famaritana marobe. Ny rafitra etsy ambony dia natambatra mba hahazoana antoka fa ny palletizing ny takelaka dia azo antoka, miorina ary milamina amin'ny dingan'ny fampiasana. Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia mametraka rafitra fiarovana roa mekanika sy elektrika mba hiantohana ny fampiasana azo antoka ny fitaovana, ary handraisana ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina PLC, ny efijery mahasarika olona-milina interface. Ny milina Leap milina haingam-pandeha haingam-pandeha dia afaka mampihena be ny asa amin'ny fizotran'ny fampiasana, manalavitra ny fahasimban'ny takelaka amin'ny fizotran'ny fitaterana, manangona tsara, mampihena ny herin'ny mpiasa, ny masinina Leap avo roa heny toerana gantry stacker dia fitaovana manaparitaka ilaina amin'ny fanapahana gorodona, fametrahana ary fametrahana ny famokarana mpamokatra gorodona.
Ny manipulator dia karazana fitaovana fandidiana mandeha ho azy izay afaka maka tahaka ny fiasan'ny tanana sy ny sandry mba hakana sy hitondra zavatra na hiasa fitaovana arakaraka ny fomba raikitra. Izy io dia miavaka amin'ny fahaizana mamita hetsika isan-karazany andrasana amin'ny alàlan'ny programa, ary manana tombony amin'ny milina olombelona sy mekanika amin'ny fananganana sy ny fahombiazana.
Manipulator no robot indostrialy voalohany indrindra, ary koa robot voalohany maoderina indrindra, afaka manolo ny asa mavesatra ataon'ny olona hahatratrarana ny mekanisation sy ny automation ny famokarana, afaka miasa amin'ny tontolo manimba mba hiarovana ny fiarovana azy manokana, noho izany dia be mpampiasa amin'ny famokarana mekanika, metallurgy, elektronika, indostria maivana ary angovo atomika ary departemanta hafa.
Hafainganana 8-10 / fihodinana / min
Ahodina ny herin'ny maotera 4kW
Fiakarana miakatra K 50 KGS
150-250mm ny sakany
Teo aloha: Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha 2 toerana manipulator gantry tokana ary mampidina ny masinina
Manaraka: Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha avo toerana avo roa heny manipulator gantry loading sy mampidina entana
Fantsona milina mitsambikina fehin-kibo 90 degre ...
Masinina mitsambikina tsy mifandray takelaka sikilety 3D ...
Masinina palletizing valiha amin'ny milina Leap
Milina mitsambikina haingam-pandeha 2 toerana mpitovo ...